Ikhaya > Iindaba > Iindaba Zoshishino > Zeziphi iindawo ezinokusetyenziselwa iprojektha?
1. Uhlobo lwethiyetha yasekhaya: Uphawu lwayo kukuba ukuqaqamba kukujikeleze ukukhanya kwe-2000 (ngophuhliso lokuqikelela, eli nani liyanda, kwaye umahluko uphezulu), kwaye umlinganiso wenqaku lescreenion ubukhulu becala yi-16: 9. Izibuko leevidiyo ezahlukeneyo zigqibelele, zilungele ukudlala iimuvi kunye nenkcazo yeTV ephezulu, efanelekileyo kubasebenzisi basekhaya.
2. Iprojektha ye-e-yorhwebo ephathekayo: Ngokubanzi, iprojektha enobunzima obungaphantsi kweekhilogram ezimbini inokuchazwa njengeprojektha ephathekayo yeshishini. Ubunzima bale mveliso bunokuthelekiswa nophuhliso lweekhompyuter ezinobunzima kunye nokukhanya kweencwadana. Izibonelelo zeeprojektha eziphathwayo kwiinkqubo zeshishini zincinci encinci, ubunzima bokukhanya, kunye nokuhamba okunamandla. Indawo yeeprojektha zesilayidi zesintu kunye neeprojektha ezinkulu neziphakathi. Ukudityaniswa kweencwadana ezinqabileyo kunye nokukhanya kunye neekhompyuter ezineeprojekti eziphathwayo zeshishini lishishini le-Intanethi. Ukhetho lokuqala lwabasebenzisi beshishini lokuhlalutya imodeli yeshishini lenkampani ephathekayo.
3. Iprojektha yenkomfa yezemfundo: ibekwe ngokubanzi ezikolweni nakwizicelo zomdibaniso, kusetyenziswa isisombululo esiqhelekileyo, ukukhanya malunga ne-2000-3000 lumens, ubunzima obulinganiselweyo, ukusasaza ubushushu kunye nokungabinalo uthuli, kufanelekile ukufakelwa kunye nentshukumo yomgama omfutshane, ujongano olusebenzayo olusebenzayo, olulula ukugcina , Ukusebenza kwexabiso eliphezulu, okulungele ukuthengwa kwesambuku kunye nokusetyenziswa okuthandwayo.
4. Iiprojektha zobunjineli eziphambili: Xa kuthelekiswa neeprojektha eziqhelekileyo eziqhelekileyo, iiprojektha zobunjineli zineendawo ezinkulu zokuqikelela, imigama emide, kunye nokuqaqamba okuphezulu, kwaye ngokubanzi zixhasa imo yezibane ezininzi, ezinokuthi zijongane ngcono nomatshini omkhulu kunye noomatshini abaninzi Indawo yokufaka ilungele imfundo, amajelo eendaba, urhulumente nezinye iinkalo.
5. Iprojektha yeqonga lobungcali: Olu hlobo lweprojektha luhlawula ngakumbi uzinzo, ligxininisa isantya sokusilela esiphantsi, ukusebenza kobushushu, umsebenzi wenethiwekhi, kunye nokusetyenziswa ngokulula. Ewe, ukuze ukwazi ukuziqhelanisa nokusetyenziswa kobuchwephesha obahlukileyo, eyona nto ibaluleke kakhulu kwiprojektha kukuqaqamba kwayo okuphezulu, okunokufikelela ngokubanzi ngaphezu kwe-5,000 lumens, kwaye elona liphezulu kunokudlula ukukhanya kwe-10,000. Ngenxa yobukhulu bayo obukhulu kunye nobunzima obunzima, ihlala isetyenziselwa iinjongo ezizodwa, ezinje ngeendawo zemidlalo yeqonga, iimyuziyam, iiholo zedolophu kunye neendawo zikawonke-wonke. Ingasetyenziselwa ukubeka iliso kwezithuthi, amaziko okuyalela ukhuseleko loluntu, amaziko olawulo lomlilo kunye nolawulo lwezithuthi zomoya, njl.
6. Ukulinganisa iiprojektha: Ezi projektha zahlukile kwezi ntlobo zeeprojektha zikhankanywe apha ngasentla. Babizwa ngokuba ziiprojektha zomjikelo kwiintsuku zokuqala. Ngokwandiswa komlawuli nothango, iprojektha ixhotyiswe ngombala ophezulu wokuthamba, okwabizwa ngokuba ngumatshini wokulinganisa. Ukwahlulahlula kwiiprojektha zemveli, zibizwa ngokuba ziiprojektha zokulinganisa. Umsebenzi wayo ophambili kukuhambisa ukukhanya ngokwenziwa kwemveliso ukwenza iprojektha eyandisiweyo, emva koko usebenzise ifilimu esemgangathweni okanye iiringi zerhasi ukumisela ubungakanani bemveliso. Ngophuhliso lwamashishini, le projektha yokulinganisa iye yaba sesinye sezixhobo zokulinganisa ezisetyenziswa rhoqo kwishishini lokuvelisa. Ukuqikelelwa rhoqo kwahlulwe kwalinganiswa ethe nkqo kunye nengqikelelo ethe tyaba. Ngokomgangatho wayo okwahlukileyo, yahlulwe yaziiprojektha zomjikelo kunye neeprojektha zedijithali.
Edlulileyo:Intshayelelo yomsebenzi werekhodi yokuqhuba imoto
Okulandelayo:Ngaba uyazi ngokwenene ukuba ungayisebenzisa kanjani idashcam yemoto? Ngaba uyazi ngokwenene indlela yokukhetha nokukhetha?